Maamulka dugsiga Agoonta ee Sh. Sharafoow oo ka war-bixiyay xaaladda waxbarasho ee dugsiga (Sawirro) – Radio Muqdisho
Maamulka dugsiga Agoonta ee Sh. Sharafoow oo ka war-bixiyay xaaladda waxbarasho ee dugsiga (Sawirro)
Maamulka dugsiga agoonta ee Sheekh Sharfoow ayaa ka warbixiyay xaaladda dugsiga iyo waxbarashada lacag la’aanta ah oo ay ka helaan caruurta agoonta ah iyo kuwo danyarta ah.
Xoghayaha xafiiska maamulka ee dugsigaasi C/fitaax Xuseen Sheekheey ayaa sheegay in dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Sharafoow oo ku yaala degmada Boondheere la furay sadex sano ka hor, wuxuuna tilmaamay in caruurta dhigata dugsiga ay gaarayaan 1112 arday oo 503 ka mid ah ay agoon yihiin, halka inta kalena ay yihiin kuwo ka soo jeeda qoysas danyar ah.
Wuxuu sheegay in dugsiga uu yahay lacag la’aan islamarkaana ay taageeraan ganacsato iyo dad muxsiniin ah oo iyagu dhaqaale ku tabarucay, isagoo intaa raaciyay in dugsiga uu leeyahay Labo Bus oo ardayda lagu qaado.
Xoghayaha ayaa hoosta ka xariiqay in dugsiga laga dhigo Manhaj Masaari ah, isagoo xusay in ardayda la siiyo tarbiyo wanaagsan, si loo dhiso akhlaaqdooda, wuxuuna tibaaxay in dugsiga ay ka howlgalaan 18 macalin oo Jaamiciyiin ah.
Wuxu ugu baaqay hey’adaha samafalka iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed in ay dhaqaale ku taageeraan dugsiga si loo dhiso aqoonta iyo tarbiyada caruurta Soomaaliyeed ee isugu jirta agoonta iyo danyarta.
Real Madrid oo Ka Badisay Kooxda Cordoba iyo Ronaldo oo Rooso Qaatay “SAWIRRO”